Adverb ထဲသို့စပိန်နာမဝိသေသန Turn ရန်ကဘယ်လို
နာမဝိသေသနမှ '' -mente '' ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် Adverb Creating
အင်္ဂလိပ်လိုကဖနျတီးဖို့ဘုံဖြစ်ပါတယ် adverb အဆိုပါဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် နောက်ဆက် တစ်ဦး၏အဆုံးရန် "-ly" နာမဝိသေသန ။ စပိန်အတွက်ကျနော်တို့နီးပါးအဖြစ်လွယ်ကူသောတစ်ခုခုလုပ်နိုင် - နာမဝိသေသနတစ်ခုအခြို့သောပုံစံဖို့နောက်ဆက် -mente ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်တစ်ဦး adverb ဖန်တီးပါ။
အဆိုပါ -mente ဟာအနည်းကိန်းမှဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ် ဣတ္ နာမဝိသေသနများ၏ပုံစံ။ ဥပမာအားဖြင့်, ruidoso ၏အနည်းကိန်းဣတ္ပုံစံ (ဆူညံ) ruidosa ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့် adverb ပုံစံ ruidosamente (noisily) ဖြစ်ပါသည်။
သီးခြားပုလ်နှင့်ဣတ္ပုံစံများနှင့်အတူ adjective နာမဝိသေသနထိုကဲ့သို့သော quieto (ဆိတ်ငြိမ်) အဖြစ်အဘယ်သူ၏အဘိဓါန်စာရင်းများ -O အတွက်အဆုံးသတ်သူများဖြစ်ကြသည်။ သက်ဆိုင်ရာ adverb ဖန်တီးရန်ဤကိစ္စတွင် quieta အတွက် -a, ပြီးတော့ -mente add ဖို့ဇာတ်သိမ်းကိုပြောင်း။ ထို့ကြောင့် quieto များအတွက်သက်ဆိုင်ရာ adverb quietamente (တိတ်တဆိတ်) ဖြစ်ပါသည်။
အများအပြား adjective နာမဝိသေသနမျှသီးခြားပုလ်သို့မဟုတ်ဣတ္ပုံစံများရှိကတည်းကနောက်ဆက်မကြာခဏရိုးရှင်းစွာအနည်းကိန်းထည့်သွင်းထားသည်။ ဒီတော့နာမဝိသေသန triste (ဝမ်းနည်းဖွယ်) က adverb tristemente သို့လှည့်ခံရနိုင်ပြီး, feliz (ပျော်ရွှင်) ကိုအလွယ်တကူ (ပျော်ရွှင်စွာ) felizmente သို့လှည့်နိုင်ပါသည်။
သတင်းထောက် Adverb အတူနာမဝိသေသနများ၏ဥပမာများ
ဤတွင်တတ်နိုင်သမျှဘာသာပြန်ချက်များကိုနှင့်အတူ -mente ဖိုင်လင့်များပါသည့်သက်ဆိုင်ရာပြီအသုံးအများဆုံးစပိန် adjective နာမဝိသေသနတချို့ရှိနေပါတယ်။ အနည်းငယ်ကိစ္စများတွင်စပိန်ဖိုင်လင့်များပါသည့်များ၏အဓိပ္ပါယ်များကိုသင်ရိုးရှင်းစွာအင်္ဂလိပ်ညီမျှနာမဝိသေသနဖို့ "-ly" ဖြည့်စွက်ခြင်းမှမျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ, အဘယ်အရာကိုထက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြောင်းကိုသတိပြုပါ။
abierto (ဖွင့်), abiertamente (ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်, သိသာတဲ့)
aburrido (ကပျင်းစရာထုံးစံ၌) (ပျင်းစရာကောင်း), aburridamente
alto (မြင့်မားသော, အရပ်ရှည်ရှည်), altamente (အလွန်အမင်း)
cansado (ပင်ပန်း), cansadamente (wearily, tediously)
común (ဘုံ), comúnmente (လေ့, ပုံမှန်အားဖြင့်)
débil (အားနည်း), débilmente (ကိုအားနည်းစွာ)
dulce (ကြင်နာ, ချိုမြိန်), dulcemente (မြိန်စွာ, ညင်ညင်သာသာ)
equivocado (မှား), equivocadamente (မှားယွင်းစွာ)
feo (ရုပ်ဆိုး, dreary), feamente (ဆိုးရွားစွာ, ဆိုးဆိုးရွားရွား)
Grande (အကြီး, ကြီးမားတဲ့), grandemente (အလွန်အမင်းအလွန်; "အဓိကအားဖြင့်" ကိုမကြာခဏ en Gran Part သို့မဟုတ် principalmente သုံးပြီးဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါသည်)
inteligente (အသိဉာဏ်), inteligentemente (အသိဥာဏ်)
justo (မျှတရုံ, အတိအကျ), justamente (မျှမျှတတ, တရားမျှတစွာ, အတိအကျ)
lento (ဖြည်းဖြည်း), lentamente (ဖြည်းဖြည်း)
limpio (သန့်ရှင်းတဲ့), limpiamente (သန့်ရှင်းမှု, သမာဓိရှိသို့မဟုတ်ရိုးသားမှုနှင့်အတူ)
lindo (တော်တော်, လှပသော), lindamente (လှလှပပ, လှပသော)
llana (ပြားချပ်ချပ်အဆင့်, unpretentious, ကျိုးနွံ), llanamente (နေရသောပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ကျခွငျးမရှိ)
Loco (သမ္မာသတိသို့မဟုတ်ဖြည့်ညှင်းမရှိခြင်းနှင့်အတူ) (အရူး), locamente
Nuevo (အသစ်), nuevamente (အသစ်, တဖန်; "အသစ်" recientemente ဟုတစ်ဘုံလမ်း)
pobre (ဆငျးရဲသား), pobremente (ညံ့ဖျင်း)
rápido (အမြန်, အစာရှောင်ခြင်း), rápidamente (လျင်မြန်စွာ, လျှင်မြန်စွာ)
repugnante (ရွံ), repugnantemente (repugnantly)
raro (ရှားပါး), raramente (ခဲ)
Rico (ကြွယ်ဝသော), ricamente (ကြွယ်ဝစွာအလွန်ကောင်းစွာ, ဖောဖောသီသီ)
sano (ကျန်းကျန်းမာမာ), sanamente (ကျန်းမာ, healthfully)
seco (ခွောကျသှေ့), secamente (အပြုအမူကိုရည်ညွှန်း coldly သောအခါ, curtly)
ရိုးရှင်း (ရိုးရှင်းသော, လွယ်ကူသော), simplemente (ရိုးရိုး, ကျခွငျးမရှိ)
sucio (ညစ်ပေ), suciamente (ကညစ်ပတ်ပေရေသို့မဟုတ်ညစ်ညူးသောလမ်းအတွက်, meanly)
tonto (လူမိုက်တို့, မိုက်မဲ), tontamente (stupidly, မိုက်)
tranquilo (ဆိတ်ငြိမ်, အေးဆေးတည်ငြိမ်), tranquilamente (တိတ်တဆိတ်, အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ)
-mente Adverb သုံးရင်ရှောင်ရှား
တစ်ဦး -mente adverb တည်ရှိစေခြင်းငှါသော်လည်းအစဉ်အမြဲပြုလုပ်တစ်ခုခုဖော်ပြ၏တစ်ခုတည်းသောသို့မဟုတ်ပင်ဦးစားပေးလမ်းဖွင့်မဆိုလိုပါ။
ပထမဦးစွာ, စပိနျအတွက်ပိုပြီးဒီတော့အင်္ဂလိပ်ထက်ကသုံးစွဲဖို့ဘုံဖြစ်ပါတယ် adverbial ထားသောစာပိုဒ်တိုများ single-စကားလုံး adverb တည်ရှိစေခြင်းငှါသော်လည်း။ ဥပမာအား baratamente တစ်ခုခုဝယ်ခဲ့ညွှန်ပြရန်အသုံးပြုသို့မဟုတ်ဈေးပေါပေါလုပ်နိုင်ပါတယ်စဉ်, က (ကနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာ) တစ်ဦး precio bajo ပြောပိုပြီးဘုံဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ပင်က de forma barata (ကစျေးပေါလမ်းအတွက်) ။
ဒုတိယအချက်မှာမကြာခဏဖိုင်လင့်များပါသည့်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်အနည်းငယ် adjective နာမဝိသေသနသီးခြား adverbial ပုံစံများတည်ရှိသော်လည်းရှိပါတယ်။ ပိုဘုံတွေထဲမှာrápidoနှင့် lento မယ့် "အစာရှောင်ခြင်း" နှင့် "နှေးကွေး" အသီးသီး, ဒါပေမယ့်လည်း "လျှင်မြန်စွာ" နှင့်ဆိုလိုနိုင်သည့်ဖြစ်ကြ၏ "ဖြည်းဖြည်း။ "
-mente Adverb ၏စာလုံးပေါင်းနှင့်အင်္ဂလိပ်
တစ်ဦးနာမဝိသေသနတစ်ခုဝဲအမှတ်အသားရှိပါတယ်လျှင်débilနှင့်rápido၏အထက်ပါဥပမာ၌ရှိသကဲ့သို့, သက်ဆိုင်ရာ -mente adverb အဆိုပါပြောပြီအလေးပေးဖွယ်ရှိလာမယ့်-to-နောက်ဆုံး syllable အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်သော်လည်း, ထိုဝဲအမှတ်အသားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော -mente ဖိုင်လင့်များပါသည့်တစ်စီးရီးအတွက်အသုံးပြုကြသည်သောအခါ, -mente နောက်ဆက်မကြာခဏအားလုံးပေမယ့်နောက်ဆုံး adverb ကနေကျဆင်းသွားသည်။ ဤသည်ရေးထားလျက်ရှိ၏စပိန်အတွက်အထူးသဖြင့်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ:
Habla lenta y က claramente ။ (သူမသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ရှင်းလင်းစွာပြော၏။ )
Anda cuidada, dolorosa y က pacientemente ။ (သူကနာကျင်စွာနဲ့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့, ဂရုတစိုက်လမ်းလျှောက်။ )
Creo Que estás equivocado: triste, absoluta y က totalmente equivocado ။ (ငါသည်သင်တို့ကိုမှားနေထင် - ဝမ်းနည်းစွာ, လုံးဝနှင့်လုံးဝမှား။ )
အင်္ဂလိပ်ဘုံအမှားမြား: A Little က - Little ကတစ်ဦးအနည်းငယ် - အနည်းငယ်
အီတလီကြိယာ conjugation: Dimenticare
သို့မဟုတ် 'ဒါကဒါကြောင့်' 'နိုင်ရန်အတွက်' '၏ Idea ဖော်ပြ.
အဆိုပါကိုယ်ရေးကိုယ်တာ '' တစ်ဦးက ''
အီတလီကြိယာ conjugation: Godere
ဂျာမန် Adverb '' Auch '' အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အီတလီကြိယာ conjugation: Sposarsi
အဆိုပါတီးဝိုင်း Lonestar ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile
ဘယ်သူ့ပထမဦးစွာရုပ်ရှင် Blockbuster ရှိခဲ့5ဒါရိုက်တာများ
"ဒီရီးရဲလ်" Talk ကိုပြရန်မှအခမဲ့လက်မှတ်တွေကိုရယူလိုက်ပါလုပ်နည်း
ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ၏ Timeline ကို
ဘယ်လိုမာစတာ Tee Times နှင့်ဒဿနိကဗေဒသန္နိဋ္ဌာန်ပါသလား?
ရေကန် Effect နှင်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး Meteorologist ဖြစ်လာ9အကြောင်းရင်းများ
အဆိုပါဖော်ပြထားသောပင်မ Idea Find လုပ်နည်း
အဆိုပါ Steamship အာတိတ်၏နစ်မြုပ်
အားလုံး TokyoPop ထံမှ Phantom မန်ဂါအကြောင်း
အဆိုပါ Aztec အင်ပါယာ၏ Conquest အတွက်အရေးကြီးကိန်းဂဏန်းများ
အရေပြား Tone ပန်းချီ
ဗာဂျီးနီးယား Woolf အတ္ထုပ္ပတ္တိ